Bit By Bit - Ny ho avy - 7.2.2 mpandray anjara mifantoka fanangonana antontan'isa
Fomba fanangonana antontan'isa avy amin'ny lasa, izay mpikaroka mifantoka, dia tsy handeha hiasa sy ao amin'ny taona nomerika. Amin'ny hoavy, isika, dia haka ny mpandray anjara-mifantoka fomba fiasa.
Raha te-hanangona angona ianao amin'ny vanim-potoana nomerika, mila mahatsapa ianao fa mifaninana amin'ny fotoana sy ny fiheveran'ny olona. Ny fotoana sy ny fifantohan 'ireo mpandray anjara dia tena sarobidy aminao; Izany no fitaovana fikarohana nataonao. Mpahay siansa sôsialy maro no zatra manao fikarohana momba ireo mponina vitsy an'isa, toy ny mpianatra ho mpianatra ao amin'ny toeram-pitsaboana. Ao anatin'ireo toe-javatra ireo dia mitaky ny zavatra ilain'ny mpikaroka, ary ny fahafinaretan'ny mpandray anjara dia tsy laharam-pahamehana. Amin'ny fikarohana momba ny fahitalavitra, ity fomba ity dia tsy maharitra. Matetika ny mpikaroka no miala amin'ny mpikaroka, ary matetika ny mpampiasa azy no mifandray amin'ny fifandraisana. Ity sehatra ity dia midika fa mifaninana amin'ny mpitsidika ny mpikaroka ary mila mamorona traikefa mpandray anjara mahafinaritra. Izany no antony nahatonga ny fizarana tsirairay izay nifandraisany tamin'ny mpandray anjara, nahita ohatra mikasika ny fianarana izay nahatonga ny fanangonam-pahaizana mifanentana amin'ny fandraisana anjara.
Ohatra, ao amin'ny toko faha-3, dia hitantsika ny fomba nanamboaran'i Sharad Goel, Winter Mason, sy Duncan Watts (2010) ny lalao antsoina hoe Friendsense izay tena rindrankajy manodidina ny fanadihadiana. Ao amin'ny toko faha-4, hitanay ny fomba ahafahanao mamorona angon-drakitra miovaova amin'ny alàlan'ny fanandramana fanandramana izay tian'ny olona (Salganik, Dodds, and Watts 2006) toy ny fanandramana mozika izay noforoniko tamin'i Peter Dodds sy Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Farany, tao amin'ny toko faha-5, dia hitanay ny fomba nanamboaran'i Kevin Schawinski, Chris Lintott, ary ny ekipa Galaxy Zoo ny fiaraha-miasa marobe izay nahatonga olona maherin'ny 100.000 mba handray anjara amin'ny astronomia (amin'ny fehezin'ny teny) sary manipika asa (Lintott et al. 2011) . Tao anatin'izany tranga izany, ireo mpikaroka dia nifantoka tamin'ny famoronana traikefa tsara ho an'ny mpandray anjara, ary tamin'ny tranga tsirairay, dia nahitana karazana fikarohana vaovao ny fomba fijerin'ny mpandray anjara.
Manantena aho fa amin'ny ho avy, ireo mpikaroka dia hanohy hampivelatra ny famolavolana ny angona angon-drakitra izay miezaka mamorona traikefa mpampiasa. Tsarovy fa amin'ny vanim-potoana nomerika, ny mpandray anjara dia iray amin'ny miala amin'ny lahatsary misy alika skateboarding.